ZTE Blade S6 Plus Review | Androidsis
Alfonso de Frutos | | MWC, About us, hevitra, ZTE
ZTE dia nitondra kilalao vitsivitsy ho an'ity fanontana ny Mobile World Congress. Efa nanana ny fahafaha-manao andramo ny ZTE Blade S6, terminal izay namela fahatsapana tena tsara ho antsika.
Ankehitriny dia anjaran'ny ZTE Blade S6 Plus, phablet misy toetra ara-teknika mitovy amin'ny an'ny zandriny lahy ary tsy tokony handany vola mihoatra ny 300 euro izany.
Amin'ny fandrefesana ny X X 156 78 8 MG ary na eo aza ny fisian'ny efijery 5.5-inch, ny ZTE Blade S6 Plus dia terminal azo tantanana. Ny endriny, tena mitovy amin'ny an'ny terminal Apple, dia tsara tarehy.
Ny mpanamboatra aziatika dia nanao ny ankamaroan'ity terminal vaovao ity, nifidy ny hampiasa plastika ho fitaovana fananganana ho an'ny vatan'ny telefaona. aza mahafinaritra ny fahatsapana ilay fitaovana, mampiseho izany fa tsy terminal famaranana izany.
Ny ZTE Blade S6 Plus dia mampiasa processeur sy RAM mitovy amin'ny zandriny lahy. Amin'izany fomba izany no ahitantsika SoC Qualcomm Snapdragon 615 octa-core ary ny maritrano 64-bit izay, miaraka amin'ny RAM 2 GB, dia manome fahombiazana mihoatra ny ampy.
Ho fanampin'izany, na eo aza ny fampiasana Android 5.0 Amin'ny maha rafitra fiasa azy, ny higadra aziatika dia nampifangaro ny sosona manokana azy, sehatra tsotra sy mora ampiasaina izay manampy ny telefaona hiasa tsara.
Ny tsy ampoizina lehibe dia miaraka amin'ny fahatsiarovany anatiny. Ary na dia misy 6 GB aza ny S16, ny ZTE Blade S6 Plus tonga miaraka amin'ny tahiry anatiny ihany 8 GB. Na dia marina aza fa ny slot misy ny karatra SD dia mamela anao hanitatra ny fahatsiarovan-tena hatramin'ny 128 GB, dia toa hadisoana lehibe ho ahy ny fahatongavan'ireo fari-piainan'ireto toetra ireto miaraka amin'ny toerana kely, indrindra raha raisintsika an-tsaina hoe ny zandriny lahy manana ROM romana indroa.
Farany manana isika Bateria 3.000 mAh fa, ny fahitana ny toetra ara-teknikan'ny ZTE Blade S6 Plus, dia ho ampy hanohanana ny fitaovana rehetra amin'ity fitaovana vaovao ity.
Ny fakantsary lehibe an'ny ZTE Blade S6 Plus dia misy a Lensa 13 megapixel miaraka amin'ny Auto Focus sy flash LED. Ny fitsapana notanterahinay dia manazava fa matanjaka be ny mason'ny phablet sinoa vaovao.
Na dia tsy nanamafy an'ity data ity aza ry zalahy ao amin'ny ZTE, azonay antoka fa ho tompon'andraikitra amin'ity singa manan-danja kokoa amin'ny finday ity i Sony. Tsy afaka manadino ny momba anao izahay Fakan-tsary eo aloha 5 megapixel.
Tsy fantatray ny daty na ny vidin'ny fandefasana ny ZTE Blade S6 Plus, na dia manantena izahay fa ho tonga mandritra ny tapany voalohany amin'ity taona ity sy amin'ny vidiny izay Tsy tokony hihoatra ny 350 euro izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Blade S6 Plus, nosedrainay ny phablet vaovao an'ny mpanamboatra aziatika
Luis Chavez Perez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Luis Chavez Perez
prialert dia hoy izy:
Eto ianao dia manana fandalinana vao haingana momba ny ZTE Blade S6 sy ny fampitahana ny vidiny
Mamaly an'i prialert